2 igumbi lendlu kwindawo ezolileyo esixekweni - I-Airbnb
2 igumbi lendlu kwindawo ezolileyo esixekweni
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguKathrine
Wamkelekile kwikhaya lethu elikwindawo ezolileyo edolophini! Le ndlu ibekwe kumbindi weCopenhagen kwaye ikufutshane nedolophu, kodwa isitrato apho indawo yokuhlala izolile, ke yindawo egqibeleleyo yokutshaja kwakhona emva kokuphonononga isixeko.
Indlu iyi-55 m2 kwaye inegumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela - yonke into ikwimeko entle kwaye yalungiswa kule minyaka imbalwa idlulileyo. Kukho iyadi kwicala ngalinye leflethi yesakhiwo enesango. Iyadi yindawo eluhlaza enendawo yokuhlala ngaphandle kunye namathafa amancinci.
4.63 · Izimvo eziyi-8
Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo, eluhlaza, kodwa i-Amagerbrogade kunye ne-Amagercentret i-100 m kuphela ukusuka kwindawo yokuhlala - izaliswe ngeendlela zokuthatha kunye neevenkile zokuthenga. Le ndlu ikumgama wokuhamba ukuya elunxwemeni e-Amager Strandpark, i-Amager Fælled park kunye neChristianshavn entle apho iFreetown ikwi-Christiania.
Umbuki zindwendwe ngu- Kathrine
Ndiya kufumaneka kwingxoxo ukuba kukho nayiphi na imibuzo, kodwa andiyi kuba lapho ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- København